संक्रामक सामग्रीको छवटा ईन्सीडरको रहस्य | Martech Zone
शुक्रवार, अक्टुबर 25, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हाम्रो आफ्नै जेन लिसाक प्रदर्शन गरिएको थियो उनको सल्लाहको लागि जब सामग्रीको विकास हुन्छ। यसले संक्रामक हुनको लागि वास्तवमा के लिन्छ? मार्केटिंग प्रोफेसर जोना बर्गरले यस बारे आफ्नो पुस्तकमा लेखे, संक्रामक: किन चीजहरू समातिन्छन्.
प्रोफेसर बर्गरका अनुसार पहिलो पाइला हो भावना। यदि तपाईंको सामग्री दर्शकहरूसँग भावनात्मक रूपमा जडान हुन असफल भयो भने, सामग्री संक्रामक हुने कुनै सम्भावना हुँदैन। WhoIsHostingThis.com सँगै यो राखिएको छ प्रोफेसर बर्गरको इन्फोग्राफिक खोजहरु!
टैग: संक्रामक सामग्रीसंक्रामक: किन चीजहरू समातिन्छन्जोना बर्गरवायरल सामग्री
अक्टोबर 27, 2013 बिहान 3:19 बजे
अर्को उत्कृष्ट पोस्ट डग! मैले यो पढेर साँच्चै राम्रो समय बिताएँ .. साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद!…